भारतीय सेनापति कात्तिक १८ मा नेपाल आउने : किन आउँदैछन् नरवाणे नेपाल ? - Jhapa Times
भारतीय सेनापति कात्तिक १८ मा नेपाल आउने : किन आउँदैछन् नरवाणे नेपाल ?
झापाटाईम्स् २८ आश्विन २०७७, बुधबार २१:३०
काठमाडौं , २८ असाेज / भारतका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे कात्तिकको तेस्रो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । भारतका २८ औं सेनाध्यक्ष नरवाणे कार्तिक १८ मा नेपाल भ्रमणमा आउन निश्‍चित भएको हो। त्यसका लागि जंगीअड्डाले विशेष तयारी थालेको छ।
भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले नयाँनक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसो बन्दै गरेको अवस्थामा हुन लागेको सेनापतिको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। नयाँ नक्सा प्रकरणपछि भारतबाट उच्चस्तरका अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको पहिलोपटक हो।
भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष नरवाणे नेपालमा रहँदा उच्चस्तरको राजनीतिक भेटवार्ता हुनेछ। सेनापति नरवाणेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र समकक्षी सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नरवाणे मुक्तिनाथ भ्रमणमा जाने कार्यक्रम भ्रमणमा समावेश गरिएको छ। तर कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर यो फेरबदल हुनसक्‍नेछ।
भारतका सेनाध्यक्ष नरवाणे नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भएको र त्यसका लागि तयारी सुरु भइसकेको जानकारी नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषवल्लभ पौड्यालले अन्‍नपूर्ण अनलाइनलाई दिए। तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा सेनापति नरवाणेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधी ग्रहण गर्ने विशेष कार्यक्रम छ। भारतका सेनापतिले नेपाली सेनाको र नेपालका सेनापतिले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी उपाधि ग्रहण गर्ने परम्पराअनुसार यो भ्रमण तय गरिएको छ। सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी उपाधि ग्रहण गरिसकेका छन्।